အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - တစ် 21st ရာစု Net ကနှင့်အတူငါးမျှား
တစ်ဦး 21st ရာစု Net ကနှင့်အတူငါးမျှား
အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများမေလ 1, 1995 အပေါ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများခရစ်တော်နှင့်သူ့ဘုရားကျောင်းနှင့် ပတ်သက်. အများအပြားအသင်းတော်များနှင့်ခရစ်ယာန်များ၏မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဂဏန်းနှင့်ရှုံးနိမ့်အသက်ဝိညာဉ်ကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်စာပေပေးပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်မည်သူမဆိုရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းထားသည်, ငါတို့အွန်လိုင်းကျမ်းစာသည်သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာကိုဘတ်ရွတ်တားမြစ်ကြောင်းနိုင်ငံများရှိလူများကကိုဖတ်လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ, စပိန်, ရုရှား, နှင့်ဗီယက်နမ်သည်။ ဒါကဂျိမ်းဘုရင်ဗားရှင်း, အမေရိကန် Standard Version ကို၎င်း, Revised Standard Version များ၏မိတ္တူပါဝင်သည်။ အွန်လိုင်းကမျြးစာကိုလေ့လာရေး Non-ခရစ်ယာန်နှင့်ခရစ်ယာန်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းသတင်းလွှာဘုတ်အဖွဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအားလုံးအတှကျအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းနှင့်ကြေငြာချက်များသည်။
အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများအင်တာနက်ပေါ်ရှိက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်အတူခရစ်တော်ခရစ်ယာန်တွေက Universal အသင်းဝင်, ကျောင်းများနှင့် Academy, တက္ကသိုလ်များ, သမ်မာကမျြး Institutes နှင့်ဟောပြောခြင်း၏ကျောင်းများ, ညီနောင်များစာပမြေားနှင့်မဂ္ဂဇင်းများ, ခရစ်ယာန်စာအုပ်ဆိုင်, အသင်းတော်များ၏အသင်းတော်များ၏ Worldwide မှ Directories နှင့်တစ်မစ်ရှင်များ Catalog ထောက်ပံ့ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ။
ကောင်းစွာထုတ်လူသိများလက်လှမ်းမမီဝန်ကြီးဌာနများ၏တစ်ဦးကအရေအတွက်ကိုခေါင်းဆောင်များ, လမ်းဘတ်စာအုပ်အိမ်, Project မှ USA Today, ကမ္ဘာ့ခရစ်ယာန်အသံလွှင့်, စကားမှ, ထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့ဖလားသမ္မာကျမ်းစာကျောင်း, လမ်းပြမြေပုံသမ်မာကမျြးစီးရီးအဖြစ် church-of-Christ.org မှတဆင့်အိမ်အပြန်မှာအင်တာနက်ကိုလူထုသိဖြစ်လာခဲ့သည် ဘဝကရေဒီယိုန်ကြီးဌာန, Faulkner တက္ကသိုလ်, နှင့်အခြားသော။
အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများအင်တာနက်ပေါ်ရှိခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်ရံပုံငွေကင်းမဲ့သူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအသငျးတျောမြားနှငျ့ဝန်ကြီးဌာနများ၏တစ်အရေအတွက်က web space ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ သခင်ဘုရားဆန္ဒရှိသည်အင်တာနက်ဝန်ကြီးဌာနများခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအစေခံနှင့်အွန်လိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားဧဝံဂေလိမြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။